Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » FAA waxay ka mamnuucday dhammaan duulimaadyada diyaaradaha Mareykanka inay dul maraan Afghanistan
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Hawlwadeen kasta oo diyaarad rayid oo Maraykan ah oo raba inuu u duulo/ka baxo ama ka tago Afgaanistaan ​​waa inuu oggolaansho hore ka helaa FAA.
FAA waxay sheegtay in garoonka diyaaradaha ee Kabul aysan cidna ka talin.
Maamulka hagista hawada ayaan laga fulin Afghanistan.
Kaliya hal waddo oo ku teedsan soohdinta bari ayaa weli furan.
Maamulka Duulista Hawada ee Maraykanka (FAA) ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku dhawaaqay in dhammaan shirkadaha duulimaadyada rayidka ee Mareykanka laga mamnuucay inay dul maraan guud ahaan dhulka Afghanistan marka laga reebo hal waddo oo weli ka furan xadka bariga.
Gaadiidleyda rayidka ah “ayaa laga yaabaa inay sii wataan isticmaalka hal diyaarad oo joogg sare ah oo u dhow xadka bariga fog si ay u dul maraan. Hawlwadeen kasta oo ka shaqeeya diyaaradaha madaniga ah ee raba inuu u duulo/ka baxo ama ka tago Afgaanistaan ​​waa inuu oggolaansho hore ka helaa FAA, ”ayaa lagu yiri bayaanka.
Goor sii horeysay, FAA ayaa sheegay in Madaarka Kabul cidna ma maamusho oo maamulka hawadda hawadu kuma socoto Afghanistan.
Talaadadii, askarta Mareykanka ayaa gabi ahaanba isaga baxay Afghanistan. Dhaqdhaqaaqa Taliban ayaa sheegay in Afgaanistaan ​​ay heshay xornimo buuxda.